रातो बन्दागोभी: प्रयोग, हानि। रातो बन्दागोभी देखि व्यञ्जनहरु
यो ताजा तरकारी, विशेष गरी बन्दागोभी खान गर्छ जसले एक व्यक्ति फेला पार्न गाह्रो छ। यो हर्बल उत्पादन हाम्रो देश को प्रत्येक दोस्रो नागरिक को आहार मा एक मूख्य स्थिति छैन। रूस मा, सबै भन्दा लोकप्रिय निम्न प्रजातिहरू छन्: बन्दागोभी, काउली, ब्रोकोली र गोभी। तिनीहरूलाई प्रयोग ध्यानपूर्वक अध्ययन र शताब्दीयौंदेखि परीक्षण गरे।
आजको पोस्ट मा हामी कुरा गर्नेछन् रातो बन्दागोभी, उज्ज्वल रंग अन्य प्रकारका फरक छ। धेरै छैन औषधीय गुण र को जीव रसायन संरचना सजग छन् तरकारी बाली। हामी बारे पूर्ण जानकारी प्रदान गर्न सकेसम्म र विस्तार उपलब्ध धेरै प्रयास गर्नेछ हाम्रो शरीर बोट लागि यो रोचक र धेरै उपयोगी। यसबाहेक, हामी एक जोडी सुदृढ व्यञ्जनहरु वर्णन।
जब बाली र एक तरकारी बजार कसरी चयन गर्ने?
म सबै उप बन्दागोभी जंगली बिरुवाबाट उत्पत्ति भएको स्पष्ट गर्न चाहन्छ। तर, तिनीहरूलाई प्रत्येक अलि फरक भिटामिन र खनिज जटिल छ। प्रत्येक उप वर्ष को विभिन्न समयमा रोपिन्छ। रातो बन्दागोभी, लाभ र सधैं इच्छुक वैज्ञानिकहरू छ हानि पूर्ण चिसो सहन्छ र विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन। तथापि, गुणस्तर र राम्रो फसल नियमित माटो, पानी, फिड र spud loosen गर्नुपर्छ लागि।
म यो बन्दागोभी धेरै अवैतनिक माली प्रेम गर्नुभयो। पकने प्रजाति आधारमा को बाली काट्ने भेला गर्न थाल्छन्। लेट प्रजातिहरू शरद ऋतु मा फसल छन् - प्रारम्भिक अक्टोबर मा। कि पछि, Cellars सफा। बन्दागोभी - संयंत्र यो क्षय कम विषय हो आफ्नो नातेदारले गर्न यसको विपरीत, लामो समय को लागि भण्डारण गरिएको छ।
बागवानी मा संलग्न छन् नगर्ने र बजार मा वा भण्डारमा खानेकुरा किन्न रुचि ती, यो तरकारी को बाह्य डाटा नजिक ध्यान सुनिश्चित। पहिले, यो यांत्रिक क्षति, पात र बिग्रेको गंध प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। दोस्रो, ताजा बन्दागोभी कहिल्यै खोच्चाउनु र फिक्का हुनेछ। म बोट गुणस्तर लोचदार पात, चमकदार र भारी एक विशेषता सुगन्ध संग।
रातो बन्दागोभी: लाभ र निको गुण
सबै को पहिलो बाह्य रंग को चर्चा सुरु गर्नुहोस्। पात रंग विशेष पदार्थ उपस्थितिको कारण - flavonoid anthocyanin। किनभने यो रोगन बोट को एक असामान्य रंग छ। साथै, anthocyanins एंटीओक्सिडेंट गुण यस कारण लोक र आधिकारिक चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ लागि, शरीर मा इन्जाइमहरु को गतिविधि असर छ। प्राकृतिक पदार्थ भारी धातु, मुक्त कण, हानिकारक toxins neutralize।
बारम्बार लोच र रक्त नली को permeability रातो बन्दागोभी सुधार प्रमाणित गर्नुभयो। प्रयोग यसलाई क्षति देखि कक्षहरू र Tissues संरचना रक्षा गर्ने क्षमता मा निहित। रेडियोधर्मी क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिका लागि सिफारिस गरियो। यो पनि तरकारी दबाव, कोलेस्ट्रल स्तर stabilizes र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो एउटा स्थापित तथ्य छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसार, लाभ indisputable छ गोभी, रजोनिवृत्ति को लक्षण (गर्म चमक, irritability, माइग्रेन) सुविधा। यो एस्कोर्बिकएसिड संरचना को उपस्थिति मा उल्लेख गर्नुपर्छ, र प्रोटिन यौगिकों, एक जीव को सामान्य विकासको लागि आवश्यक हो जो। को, दृश्य भयातुर र प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य कार्यका लागि जिम्मेवार छ कि भिटामिन - retinol धेरै संयंत्र मा निहित।
यो तरकारी बाली को निको शक्ति overestimate गर्न गाह्रो छ। जठरांत्रिय पर्चा लागि अपरिहार्य जडिबुटी: सफा, पाचन दुरुस्त, साना sores निको पार्नुहुन्छ। तपाईं आहार गुण बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। विशेषज्ञहरु unanimously चाँडै saturates को तरकारी, भिटामिन भरिन्छ कि भोक blunts र वजन बढावा घोषणा गर्दछु। को संरचना sucrose र स्टार्च को नि: शुल्क छ, त्यसैले तथ्याङ्कले गर्न हानि हुने छैन। मात्र 26 क्यालोरी लागि उत्पादन खाता 100 ग्राम।
खतराहरूबारे एक सानो
रातो बन्दागोभी, लाभ र प्रयोग गर्न पूर्व अध्ययन गर्न आवश्यक छ, जो contraindications, प्रतिबन्ध एउटा सानो नम्बर छ। हेरविचार संग यो duodenum को अल्सर रोग मा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। सिफारिस बुझाने तरकारी वा पकाउने पर्दाफास। यो भने अत्यधिक ग्याँस गठन र ऐंठन को औषधिको खुराक कम गर्न आवश्यक छ।
संसारको धेरै देशहरूमा गोभी प्रयोग। quenching, पकाउने, frying: पनि गर्मी उपचार पछि खुलिरहेको तरकारी प्रयोग गर्नुहोस्। मूलतः यो ताजा खपत नुनीन वा मसालेदार। यो माथिल्लो पात र टाउको बाहिर त्यहाँ राम्रो, तिनीहरूले nitrates जम्मा किनभने त्यो उल्लेख हुनुपर्छ। कृपया रोचक पकाउने विकल्प फेला पार्न।
Cranberry को वाहेक संग नुस्खा
फिल्टर पानी आधा ग्लास।
साढे रातो बन्दागोभी को।
ताजा cranberries दुई सय ग्राम।
चम्मच अदुवा मूल grated।
सोया सस - 20 ग्राम
मकै तेल र चिनी - एक चमचा।
धोए cranberries एक मोर्टार मा चोट, परिणाम रस cheesecloth वा राम्रो छनौट मार्फत पारित गरिएको छ। पातलो स्ट्रिप्स मा बन्दागोभी काट्नु, एक fruity पेय खन्याउन र आधा एक घण्टा खडा गरौं। सोया सस, अदुवा, घिउ र चिनी: बाँकी घटक संग Marinated तरकारी स्वाद।
यो सलाद मासु र माछा व्यञ्जन लागि सिद्ध छ। गाजर, स्याउ, टमाटर, बीट, अनुरूप पाइन नट, रातो बन्दागोभी। लाभ (व्यञ्जनहरु beriberi राहत) ताजा सलाद दुई पटक रूपमा हिउँदमा ठूलो।
सहिजन र भुईँकटर संग
Gourmets लागि यो piquant सलाद। नम्र अम्लता र नाजुक मिठास को रोचक संयोजन एक उत्कृष्ट परिणाम दिन्छ। भाँडा को संरचना समावेश:
रातो बन्दागोभी को 300 ग्राम।
पाकेको भुईँकटर (उपलब्ध समर्थित) 300 ग्राम को राशि मा।
साग को एक गुच्छा।
लसुन - तीन स्लाइस।
मिठाई चम्चा - तयार सहिजन।
मेयोनेज - 50 ग्राम
कागति को रस निचोड, कटा भुईँकटर भन्दा खन्याउन। आफ्नो हात पसार्नु स्लाइस संग मिश्रण, पातलो स्ट्रिप्स मा बन्दागोभी Shred मीठो मरिच को, एक सलाद कचौरा मा बदलाव। भुईँकटर थप्नुहोस्। squeeze मेयोनेज लसुन, सहिजन संग मौसम, नुन: लाउने बनाउन। , खाना संयोजन गर्न तयार सस कटा साग संग पकवान सजाउनु।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, गोभी विभिन्न व्याख्याहरु हामी तयार छौं। को बोट प्रयोग खनिज र भिटामिन को एक किसिम द्वारा शरीर संग संतृप्त छ।
यहाँ हामी विशेषताहरु र तरकारी उत्पादन को गुण सबै सूचीकृत छन्। यो बोट बराबर पाउन गाह्रो छ, त्यसैले तिनीहरूलाई रमाइलो गर्न मौका सम्झना छैन। सबै अङ्गहरू र मानव रातो बन्दागोभी को Tissues मा Salutary प्रभाव। लाभ र हानि, हामी बाहिर फेला रूपमा, छैन तुलना छन्। निस्सन्देह, बन्दागोभी को निको गुणहरू एक contraindication भन्दा धेरै छ। स्वस्थ र खुसी हुन!
यस तथ्याङ्कले गर्न हानि बिना अन्डा के खाना पकाउनु?
कति क्यालोरी एक marshmallow र कसरी यो उपयोगी छ
अमिलो - लाभ र बाल्यकाल को उत्पादन परिचित हानि
Pancreatitis लागि आहार मा प्रतिबन्ध रोग को उपचार मा आधारभूत चिकित्सा हुन
लागि यन्त्र चालकले (कोड 28) स्थापना गरिएको छ: के?
वास्तविक सम्पत्ति स्वामित्व को दर्ता लागि म्याद। स्वामित्व को सही को पहिचान
तार खण्ड एक उत्पादन बीच जडान र
सञ्चालन कस्तो देखिन्छ? अस्पतालले के हेर्छ?
"गोल्डन बल्फ।" अभिनेता मिखाइल श्वीट्जर उत्कृष्ट कृति
मल रूपमा चिकन मल: एक आश्चर्यजनक प्रभाव
ट्यूमर मार्कर - क्यान्सर उपचार मा आदर्श र विकृति